Litecoin mune zvakasikwa zvemakristudigasi: dzimwe nzira dzekudyara | Ehupfumi Zvemari
Litecoin mune zvakasikwa zvemakristudigasi: dzimwe nzira dzekudyara
Litecoin yakaratidzirwa nemutengo wakaderera kana uchienzaniswa nemamwe madhijitari, yanga ichingofamba nemitengo yakaderera kubva payakasikwa.
Chinhu chakakonzera vatengesi vazhinji kuti vatarise mari iyi chaiyo, iko kushanduka kwakabvumidza kukosha kwayo kune mamwe matanho.
Izvo zvinokwanisika kutenga Litecoin nhasi kuti utenge nemutengo wakakwira mune ramangwana.
Aya ndiwo maratidziro aanowanzoitwa mune iyi mhando yezvehupfumi mamiriro. Zvinotarisirwa kuti kukosha kwacho kwakwira uye purofiti ichawanikwa kana mari yatengeswa nemutengo wepamusoro.
Iyi mari yemari inonzi iri…. "Sirivha yendarama ye bitcoin". Nhasi, "Litecoin (Ltc)" inozivikanwa pakati pevezera rayo, mari iri kuwedzera, iyo inofanirwa kutaurwa uye kuteverwa mukati mepasi rose remagetsi emari.
Zvirokwazvo zvakasikwa zvinowanda gore rimwe nerimwe, sekutengeserana nerudzi urwu rwemari kuwedzera mukuzivikanwa. Chimwe chinhu chiri kuchinja chiono chemaitiro ekuchiita uye kuchibata.
Iyi cryptocurrency inotsigirwa pasi pe "poindi kunongedza" basa "Peer kune Peer" (P2P)
Litecoin ndiyo imwe yenzira dzekutengesa dzinozadzisa Bitcoin, yekutanga uye inonyanya kukosha yemadhijitari akange aripo. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti uzive kuti mukati mawo haina kusiyana zvakanyanya kubva kune imwe mari yemagetsi, sekunge Ethereum anogona, semuenzaniso, ane chimiro nehunhu zvinoita kuti zvioneke kana zvichienzaniswa neBitcoin.
Imwe yenyaya dzinoita kuti iyi cryptocurrency ibude pachena kumhanya kwainoita muzvinhu, zvine mukurumbira kumusoro, kufambisa mashandiro kana ikashandiswa. Nechikonzero ichi inogona kutsanangurwa seyakareruka uye yakawanda kupfuura Bitcoin.
1 Ndedzipi dzimwe nzira dzekudyara idzo cryptocurrency iyi?
1.1 Litecoin: yezvinhu zvitatu zvakakosha kudhijitari pasi rose:
2 MaLitecoins anochengeterwa kana kuchengetwa kupi?
2.1 Ngatitarisei mamwe marudzi akasarudzika emari.
3 Maitiro ekudyara muLitecoin: Imwe nzira
4 Ko Litecoin ichave chivimbiso chechokwadi chenguva yemberi here?
Ndedzipi dzimwe nzira dzekudyara idzo cryptocurrency iyi?
Ngatipindurei uyu mubvunzo gare gare tione ikozvino
mamwe ehunhu hwayo hwakakosha. Nekudaro isu tichajekesa kazhinji mibvunzo inogara ichiumbwa neavo vanotanga kuenderana nemari iyi, uye vanozove zivo ichatibatsira kunzwisisa Litecoin mune imwe nzira inonzwisisika uye yakarongeka.
Litecoin: yezvinhu zvitatu zvakakosha kudhijitari pasi rose:
Iyi cryptocurrency inogona kutorwa seimwe yeanonyanya kukosheswa pasirese.
Chimiro chayo chehunyanzvi chakafanana chaizvo neicho cheBitcoin sezvatatsanangura kare.
Pfupiso iyo inozivikanwa nayo ndeiyi LTC uye yaifungidzirwa kuzadza Bitcoin, kana kuve imwe mari yemagetsi yacho.
Iyi netiweki ichaita kugadziriswa kwebhokisi mukati menguva yemaminetsi maviri nemakumi maviri, panzvimbo yemaminitsi gumi ega ega, kubvumira kusimbiswa kwekukurumidza kwekutengeserana. Iyo network inoburitsa kanokwana kana zvakapetwa akawanda mauniti kupfuura iyo inokwanisa kuburitsa Bitcoin, ndokuti, vangangoita mamirioni makumi mana nemasere.
Kuchera kuchagadziriswa nekuti hakudi mhando dzemidziyo seyakaomarara sekunge iri kudikanwa neBitcoin. Izvi zvinobva zvashandisa iyo scypt basa mune yayo bvunzo algorithm, inova yakateedzana yakaoma memory basa.
Litecoin yakakamurwa kuita zviuru zana zvemazana, izvo zvinotsanangurwa nenzvimbo sere.
Mari iyi inokwanisa kuchinjaniswa nedzimwe dzerudzi rwayo, kureva kuti, mamwe ma cryptocurrensets kana emari idzo dzakatomisikidzwa, senge maEuro, Madhora, nezvimwe.
MaLitecoins anochengeterwa kana kuchengetwa kupi?
Kunge chero imwe mari yerudzi rwayo, Litecoins haigone kuchengetwa mumasangano ekubhengi. Kune izvi, izvo zvinonzi Wallet "zvikwama" zvinoshandiswa.. Inowanzo iri sevhisi inopihwa neavo vakagadzira iyo mhando yeiyo cryptocurrency iri kubvunzwa, kunyange hazvo nhasi kune vamwe vanopa zvikwama zvemari yemagetsi, ine huwandu hwakavimbika hwekuvimbika.
Kune maficha ekushandisa nharembozha, pazvinokwanisika kuve nekuwana kune iyo Litecoins portfolio, kuve nekugona kuita zviitiko nekutonga mari chero nguva, pamwe nemukana wekuwana yakagadziriswa dhata kana ruzivo senge rwekutenga nekutengesa kukosha kwemari, pakati vamwe.
Kune zvakare Mahwendefa epamhepo anoshandiswa kubva kuPc.
Ngatitarisei mamwe marudzi akasarudzika emari.
Icho chikwama kuitira kuti ushandiswe kubva kune nharembozha ine iOS system, iine kuzara kuwana kuaccount uye mukana wekuita ese marudzi ekushanda.
Iyi ndiyo mhando ye online chikwama chekushandisa kubva kune yako wega komputa.
Yakakurumbira pakati pevashandisi vemari iyi nekuda kwekureruka kwekushandisa, kuenderera kuwanikwa, uye chengetedzo. Izvo zvinokwanisika kubva muchikwama ichi kuita kuchinjana nevashandisi vemamwe marudzi eecryptocurrencies, unogona kubhadhara kana kukumbira kubhadhara.
Iyi ndiyo yaive chikwama chekutanga chaivepo cheLitecoin, ine yakavakirwa-mukati kuenderana kwemafoni efoni, ese maApple neIOS masystem.
Kune zvakare Hardware iyo inochengeta iyo cryptocurrencies asi isingaenderane, uko pasina kunyatsobatana neInternet ivo vanozokwanisa kuzvichengeta pasi peyakanyanya matanho ekuchengetedza
Maitiro ekudyara muLitecoin: Imwe nzira
Ngatitarisei dzimwe nzira nhatu dzekudyara mune ino mari.
Tenga Litecoin pane Shanduko:
Iyo ndiyo yakapusa pane dzese mikana. Litecoins inogona kutengwa uchishandisa Shanduko, semuenzaniso Poloniex kana Bittrex. Rangarira kuti mari iyi inotengeswa pasi pechidimbu LTC. Kana iwe usina imwe mhando yeiyo digital mari yekuchinjana, zvinokwanisika kuwana Litecoins uchishandisa kiredhiti kadhi ku Changelly.
Tenga Litecoin uchishandisa "Chibvumirano cheMusiyano" CFD:
Iyi ndiyo imwe sarudzo yekuisa mari mune ino mari kuburikidza neinternet broker. Nenzira iyi uye semukana weCFDs, Iko kune mukana wekushandisa mari yekukwirisa, kugona kuwana mari nekufamba kudiki. Nekudaro, kana iyo njodzi isingaitwe nemazvo uye zviri nyore, mari irimo inogona kurasikirwa zvachose kana chikamu.
Kuti ugone kudzidzisa mukudyara kweCFD pasina kufungidzira chero njodzi, zvinokwanisika kushandisa simulators.
Kuchera iyo cryptocurrency:
Saka kuti tinzwisise mukana wekudyara uyu, ngatitsanangurei muchidimbu kuti chii chinonzi cryptocurrency mugodhi.
Kucherwa kweiyo cryptocurrency ichave nzira iyo munhu anogona kujoina yakatarwa network maererano necha blockchain tekinoroji, uye ichave ichipa simba rekumanikidza kwazviri.
Nenzira iyi, mashandisirwo ari kuitwa mup2p network achasimbiswa, ayo anoumba husingagumi hwemakomputa akarongedzwa nenzira yakasarudzika.
Mukutsinhana nemupiro uyu, vacheri vachange vachiwana mibairo muchimiro chemari yemadhora. Iyo inokwidziridza simba rehardware kugadzira migodhi, inowedzera mikana yekuita purofiti nemari chaiyo mari.
Kune zvakare kuchera makore kana kuchera Cloud. Iyi sarudzo ichapa vashandisi kugona kweimwe nguva yekuita kuburikidza nekutenga kweyezvigadzirwa zvemigodhi yemahara munzvimbo dzematare.
Icho chichava chimwe chinhu senge kubhadharisa kwecomputer kugona, nekudaro kudzivirira iko pachako kutora mhando yemigodhi Hardware uye software, zvakare kudzivirira zvimwe zvinoshandiswa senge magetsi anoshandiswa ari kutaurwa, bandwidth uye zvakasiyana zvinodiwa izvo nzvimbo dzine kuchera.
Nhasi kune makambani mazhinji anopa ino sevhisi yekuchera gore kune chaiwo madhijitari, uye zvechokwadi Litecoin ndomumwe wavo.
Litecoin yekuchera inowanzo mhanyisa kupfuura mamwe madhijitari. Neichi chikonzero, iko kusimba kweiyo inodikanwa tekinoroji yekushandisa inogona kunge iri shoma.
Iyo sisitimu inoshandiswa kugadzira cryptographic kuverenga iri nyore pane iyo inoshandiswa nemamwe marudzi emagetsi emari anofanirwa kujekesa tambo dzakakura dzerogarithm.
Iyo software yakashandiswa kugadzira dhijitari yemari yekuchera inowanzo kubva kune vakagadzira ivo pachavo.
Litecoin-qt inoshandiswa kune Litecoin, iyo inogona kutarisirwa sevha uye yakabatana nenzira imwechete nevamwe vanochera.
Izvo zvakakosha kujekesa chimwe chinhu, software yekuwana ichafanirwa kutariswa mukunyorerana neyekushandisa iyo ichashandiswa.
Mushure mekunge uine Hardware pamwe neiyo inodikanwa software kuti ugone kuchera maLitecoins, maitiro anoitwa otomatiki.
Litecoins inogona kucherwa zvakazvimiririra kana mudziva kana mudziva. Kana dziva revacheri rikabatana, zvinokwanisika kuve zvine pundutso nekuda kwekuti zviwanikwa zvakaunganidzwa izvo zvinobvumidza yakawedzera nzira yekumhanyisa kukudziridza chaiwo masvomhu ekuverenga, nokudaro ichigadzira mabhuroko nekumhanyisa kukuru kupfuura painoitwa ne nzira yega.
Mubairo pakati pevashandi vemumigodhi vanogadzira block, inoitwa tichifunga huwandu hwezviwanikwa izvo mumwe nemumwe akapa mukugadzirwa kwayo.
Pakati-gore ra2017 zvaifungidzirwa kuti Litecoin yatove nekutenderera kweanopfuura mamirioni makumi mashanu nemaviri, nekudaro ichipfuura hafu yenyaya yaitarisirwa nevagadziri vayo.
Izvi zvinoratidza pachazvo kushandiswa kukuru kuri kuitwa neiyi cryptocurrency, iyo yakagadzirwa muna 2011 uye iri kutoverengera pamakota matatu emuganhu wekuburitswa wawakaisirwa iwo.
Ko Litecoin ichave chivimbiso chechokwadi chenguva yemberi here?
Mutengo wakachipa wemari iyi uchienzaniswa neiya yeBitcoin neEthereum chimwe chinhu chiri kuyedza zvakanyanya uye chinogona kuratidza kuwedzera kuchifarira.
Chero zvazvingaitika, zvakafanira kujekesa kuti uyu 2018 unozogona kunge uri gore rekukwira nekudzika mumusika, uko kukosha kweLTC kunogona kuonekwa kuchidonha. Zveizvi matanho akanyanya anodikanwa uye kuziva chaizvo kana zvichizogoneka mumwe nemumwe kutarisana nekumwe kudonha, uye ipapo kuvhura kuti utenge pamatanho chaiwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Noticias » Litecoin mune zvakasikwa zvemakristudigasi: dzimwe nzira dzekudyara
Mari dzese dzekudyara dzaunogona kuhaya
Musika weUS stock unodonha 5%, kungave kuri kutanga kwekudonha kwakawanda